२०७३ लार्इ फर्केर हेर्दा | Hamro Patro
२०७३ लार्इ फर्केर हेर्दा
त्यस्तै नेपाली सपूत लोकप्रिय कलाकार जोडी धुर्मुश, सुन्तली भूकम्पको घाउमा मल्हम लगाउने योजनामा यति धेरै मल्हमको सपना बुन्न थाले की भाैतिक रूपमा प्रकृतिले ढालेको हज्जाराैंको अाश्रय स्थललार्इ ब्यूताउँने अभियानमार्फत् यूग जोडी बन्न सफल भए । केहि न गुमाएकाहरुको लागि महाभूकम्प बिस्तारै बिस्तारै एउटा याद हुँदै गैरहेको छ, केहि न केही अवश्य गुमाएकाहरुको पीडा कम हुन सकेको छैन, अझै भत्किएका अोतहरू ठडिन सकेको छैन, सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो ठूलो धनराशी मासिक तलबमा २ जना अार्इसके तर पुनर्निर्माणले अझै उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
हामिहरु सबैजनाले अहिले आफुलाई २०७३ बाट २०७४ तिर ढल्काइरहेका छौ । फेरी हाम्रो सकारात्मक बानी कस्तो भने जुनसुकै वर्ष जस्तो हिसाबले चल्छ हामी त्यसमा उसैगरी समाहित हुन खप्पिस छाैं । न कहिले राजनीतले साथ दियो नेपालीलार्इ न नेपाली अाफैले कहिले कोशिस गरे, हामी राजनीतिलार्इ गाली गर्छाैं तर बसबाट थुक्न, घर अगाडी फोहर फाल्न अहिलेपनि लाज मान्दैनाै । शायद् हामीमा अन्तरमनको परिवर्तन नअाएको देखेरै होला, राजनीतिकर्मीले हामीलार्इ गल्ट्याङ मल्ट्याङ खेलाउन जानेका । हामी केवल गुलेलीको मट्याङ्ग्रा त बनीरहेका हैनाै ? एकफेर सोंच्ने हो की!
हामी हरेक नयाँ वर्षमा एउटा अाशा गर्छाैं, सपना देख्छाैं मातृभूमी नेपाल शान्तिसाथ, खुशी र सुखी भएर विकासको सगरमा अघि बढ्दै गरेको तर हरेक पल्ट एउटा सानो खुशी कहिले खेलबाट अाउँछ, कहिले सामाजिक चेतनाबाट प्राप्त हुन्छ तर अचानक केहि नकारात्मक घटना राजनीतिक दीर्घाबाट भर्इदिन्छ जसले निम्त्याउने अविराम राष्ट्रिय अन्याैलको अायू झन्-झन बढाउँदै लैजान्छ ।
यस्तै अन्याैलको खाल्डा-खुल्डिबिच २०७३ एउटा अर्को उतार चढावको वर्षमैं गन्ति भएर विदा भयो । केहि सकारात्मक र प्रशस्त नकारात्मक समाचारले वर्ष २०७३ मा हामि सबैलाई कहिले खुशी त कहिले दुखि बनाइरह्यो । हाम्रो पात्रो आज यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्दछ २०७३ का केहि घटना, केहि नेपाली नायकका कथाहरु जुन शायद हामि लामो समयसम्म बिर्षन सक्दैनौ ।
यस पटक त बलियो जनमत पाएको यो सरकार अनावश्यक राजनीतिक जालोमा नपर्ला भन्दा भन्दै २०७३ ले नेपालमा जनताले पत्याउँदा पत्याउँदै विभिन्न तत्वले खेलेको फोहोरी खेलको कारण जनताको लोकप्रिय सरकार नराम्ररी सिकार भयो, सरकार ढालियो, तर सुखद् पाटो यस पटकको सरकारको सत्ता बहिर्गमन एैतिहासिक थियो, ढाल्नेहरू न्याउरीएका थिए, अनि बाहिरीनेको मुहार मलिन थिएन, सत्ताबाट हाँसी हाँसी बाहिरीएको सरकार शायद् इतिहासमैं पहिलो बन्यो ।
अषाढ २८मा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट आफू फिर्ता भएको कुरा सभामुखलाई जानकारी दिएपछि त्यसको भोलिपल्ट अर्थात असार २९ गते नेपाली काँग्रेसले नयाँ सरकार गठनकालागि माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिएसंगै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछी साउन ९ को दिन ओलीले राजिनामा दिए र साउन १९ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ३९ औं प्रधानमन्त्री चुनिए । पहिला जस्तै यो वर्ष पनि सरकार स्थिर हुन सकेन ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन
यो वर्ष राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । राप्रपा नेपाल र राप्रपाको एकतापछि पहिलो पटक भएको महाधिवेशनमा एक लाखभन्दा बढी जनसहभागिता रहेको थियो । महाधिवेशनमा देशभरबाट तीन हजार भन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए ।
काठमाडौं भृकुटी मण्डपमा करीब तीन दिन चलेको एकता महाधिवेशनमा कमल थापा अध्यक्ष निर्वाचित भए ।
माधव घिमिरेको निधन
यो बर्षको एउटा दुखद खबर बन्न पुग्यो पुर्व गृहमन्त्रि माधव घिमिरेको निधन । सोह्रश्राद्ध सकाएर आफ्नो परिवारसंग मुस्ताङको कागबेनीबाट फर्कंदै गरेको गाडी चितवनको दाह्रेचोक स्थित घोप्टेभीरबाट मुगलीन र कुरिनटारको बीचमा खसेर बेपत्ता भएको थियो । त्यसपछि , घिमिरेकी आमा लगायत अरु २ जनाको शव त फेला पर्यो । तर पुर्व गृहमन्त्री घिमिरे भने बेपत्ता नै रहे ।
नेकपा एमालेको मेची महाकाली अभियान अन्तर्गत सप्तरीको राजविराजमा एमालेको राष्ट्रिय अभियानलाई विथोल्न खोजेको मोर्चा कार्यकर्ता र प्रहरीबीच झडपहुँदा प्रहरीले गोली चलाएको थियो । झडपमा प्रहरीको गोली लागी ५ जनाको मृत्यु भएको थियो , त्यसपछि केहि समयको लागि सप्तरी सिरहाको माहोल तनावग्रस्त रह्यो । त्यहि घटनाको कारण मधेशी मोर्चाले सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता पनि लिईएको थियो ।
लोडसेडिङ मुक्त नेपाल
सङ्गै देशमा यति लामो लोडसेडिङ लम्ब्याएर देशमा केहिको इशारामा पोषिएका उर्जा माफियाका अनुहारहरू पनि जनताले देख्न पाए । त्यस्ता अनुहार खोज्न यति सहज थिएन, सम्बन्धित मन्त्रालय, प्राधिकरण प्रमुख अनि नेपाल प्रहरीका केही नायकको पहलमा रातपरेपछि सल्बलाउने बन्द बिजूलीका खलपात्रहरू रङ्गेहात समातिन थाले । न कुलेखानी सुक्यो, न प्रमुख स्टेशन, सव-स्टेशनमा प्राविधिक गड्बडी.... बिजूली बल्न थाल्यो र अहिले पनि बत्ति निभ्न नदिने अभियान जारी छ ।
यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा उल्लेखनीय प्रगतिहरु देख्न पाइयो । एकातिर ढल्केवर – खिम्ती प्रशारण लाइन सम्पन्न भै बिद्युत सुचारु भयो । जसले गर्दा भारतबाट आयातित बिजुली अब सीधै काठमाडौं ल्याउन सफल भइयो । माथिल्लो तामाकोशी जलाबिध्युत आयोजनाको द्रुत गतिमा निर्माण क्रम जारि रह्यो । बुढी गण्डकी जलबिद्युत आयोजनामा मुहाब्जा वितरण कार्यक्रमले पनि यस वर्ष राम्रो गति लिएको छ । भैरहवा र पोखराको अन्तराष्टिय विमानस्थलको कार्यपनि तिब्रगतिमा चलिरह्यो । मध्य पहाडी लोकमार्ग , पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुग्लिन नारायणघाट , काठमान्डौ चक्रपथ अन्तर्गत कोटेश्वोर-कलंकी सडकका कार्यहरु यो बर्ष तिब्र गतिमा भै रहेका छन् भने अर्कोतर्फ काठमाण्डौ –हेटौडा द्रुतमार्ग नेपाल सरकारले आफै निर्माण गर्ने भनि औपचारिक निर्णय पनि यसै बर्ष लिएको थियो ।
लोकमानसिंह कार्की र सुशील ज्ञवाली बर्खास्त
यसै बर्ष नेपाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले कार्कीको अहितमा फैसला सुनाएपछी लोकमान सिंह कार्की पदमुक्त भएका थिए। अर्कोतर्फ यहि बर्ष पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरिएको थियो । कार्य सम्पादन राम्रो हुन् नसकेको आरोप परेका ज्ञवालीलाई दुई पटकसम्म सोधेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेको थियो ।
पुष्पा बस्नेत सिएनएन सुपर हिरो , मीरा राई विश्वकै साहसी व्यक्ति
कारागारमा रहेका अभिभावकका बालबालिकालाई मध्यनजर राखेर बाल विकास केन्द्र खोली आवासीय सुविधासहित शिक्षादीक्षाको व्यवस्था गरेर उल्लेखनीय काम गरेकोमा सिएनएनले बस्नेतलाई सन् २०१२ मा ‘सिएनएन हिरो’ अवार्ड प्रदान गरेको थियो । यस बर्ष अमेरिकी टेलिभिजन सिएनएनले ‘सिएनएन हिरो’ अवार्ड प्रदन गर्न गरेको १० वर्ष पुगेको अवसरमा पूर्व सिएनएन हिरो मध्येबाट सुपर हिरो अवार्ड प्रदान गरेको थियो जस अन्तर्गत पुष्पा बस्नेतले मनोनयनमा परेका चार सिएनएन हिरोलाई पछि पार्दै सुपर हिरो अवार्ड जितेकी थिइन ।
अर्कोतर्फ यो बर्ष एउटा चर्चित च्यानल नेसनल जोग्राफीले मिरा राईलाई एड्भेन्चर अफ द इयर २०१७ घोषणा गर्यो । भोजपुरको सानोदुम्मा जन्मिएकी २९ वर्षीय मिरा राई निरन्तर अल्ट्रा धावकका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा सहभागी हुँदै आएकी छन् । नेसनल जोग्राफीको वेभसाइटमा प्राप्त भोटका आधारमा उनलाई छनोट गरिएको थियो । यसअघि मीराले गत वर्ष फ्रान्समा भएको ८० किलोमिटरको विश्व मोन्ट ब्लंक म्याराथनमा मिरा पहिलो भइन् भने गएको वर्ष हङकङ भएको आइल्याण्ड ट्रेल रेस पनि मिराले जितेकी थिइन् । उनको यो प्रयासको सम्मान गर्दै सरकारले उनलाई नगद ३० लाख समेत प्रदान गरेको थियो ।
महिला प्रमुखमा इतिहास
यो बर्ष नेपाल बिश्व इतिहासमा नै यस्तो मुलुक बन्यो जहाँ राज्यको तीनवटै अंगमा महिला प्रमुख छ्न।
नेपालमा सरकारको तिनवटै अंग ब्यबस्थापिका,कार्यपालिका, र न्यायपालिकाको मुख्य पदमा महिला रहेकाछन । यो बर्ष प्रधानन्यायधिसमा सुशिला कार्की नियुक्त भएपछी नेपाल यो इतिहास बनाउन सफल भयो । यसअघिनै सभामुख अोन्सरी घर्ति र राष्ट्रपति बिद्या देवी भण्डारी निर्वाचित भइसकेका थिए ।
थुप्रै खेलाडीहरु र तिनका खेल ले यो बर्ष नेपाल भरिनै चर्चा कमाइ राख्यो । चाहे त्यो पौडीमा गौरिका सिंह होस् या क्रिकेटमा दिपेन्द्र सिंह एरि र सन्दीप लामिछाने , या चाहे महिला फुटबलर सावित्रा भण्डारी । जुडो, फुटबल, क्रिकेट सबैतिर नेपाली खेलाडीहरुको सम्मानीय प्रयासले बिस्व खेलकुद जगतमै नेपालको प्रभाव बनाइँराख्यो ।
यसै बर्ष नेपाली भलिबलले माल्दिभ्समा भएको सेन्ट्रल जोनल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पहिलो कांस्य पदक जीत्न सफल भयो । फुटबलमा भने यस बर्ष एएफसी सोलीडारिटी कप जितेर नेपाली फुटबलले उपाधिको ह्याट्रिक गर्यो।
क्रिकेटमा यो बर्ष आफ्नो घरेलु मैदानमा खेलेको आईसीसी विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपअन्तर्गत का ४ खेल मध्य ३ खेल मा नेपाल बिजयी रह्यो । २०७३ मा खेलकुदले केहि नया आशाहरु जन्माएको छ , जुन २०७४ मा झन् सशक्त हुदै जाने प्रवल सम्भावना छ ।
वर्षका केहि प्रभावशाली व्यक्तिहरु
नेपाल विद्यूत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ यस बर्ष जनताप्रतिको जिम्मेवारीलार्इ नायक सरहको भूमीकामा सफल भएका कारण निक्कै चर्चामा रहे । मूलुकलार्इ लोडसेडिङ मुक्त गर्न आफ्नो ज्ञान र व्यवस्थापकीय क्षमता प्रदर्शन गरेका घिसिङ अहिले सम्पूर्ण देशवासीले रुचाएका व्यक्तित्व हुन् । देशको प्रमुख समस्या निर्मुल पार्ने प्रयासमा रहेका यी नायकलार्इ २०७४ झन् उत्कृष्ट रहोस । इनको कार्य कुशलताले जति सफलता हात पार्छ त्यति उज्यालो हुनेछन् नेपाली घरहरू । वर्ष नेपाली सपूत कुलमान घिसिङ्लार्इ हाम्रो शुभकामना ।
धुर्मुस सुन्तली अर्थात सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरे
नेपालको भलो चिताउने हरेक नेपाली मन छ, तर धन भएर पनि उदाहरण बन्न नसकेका हामी प्रशस्त छाैं । तर सकारात्मक सोंचकालागि धन होस नहोस् तर जब तन, मन अनि जीवन कुनै शुभ सोंचप्रति समर्पित हुन्छ तब कुनै धनाढयले त्यो शिखर चुम्न सक्दैन । त्यस्तै नेपाली सपूत लोकप्रिय कलाकार जोडी धुर्मुश, सुन्तली भूकम्पको घाउमा मल्हम लगाउने योजनामा यति धेरै मल्हमको सपना बुन्न थाले की भाैतिक रूपमा प्रकृतिले ढालेको हज्जाराैंको अाश्रय स्थललार्इ ब्यूताउँने अभियानमा प्राप्त सफलता मार्फत् यूग जोडी बन्न सफल भए ।
केहि न गुमाएकाहरुको लागि महाभूकम्प बिस्तारै बिस्तारै एउटा याद हुँदै गैरहेको छ, केहि न केही अवश्य गुमाएकाहरुको पीडा कम हुन सकेको छैन, अझै भत्किएका अोतहरू ठडिन सकेको छैन, सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्यो ठूलो धनराशी मासिक तलबमा २ जना अार्इसके तर पुनर्निर्माणले अझै उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।
आफ्नै इच्छाशक्तिले गठन गरेको 'धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेशन' मार्फत् ठाउँ ठाउँमा नमूना बस्ती बनाएर पुनर्निर्माणको काम जनस्तरबाटै सम्भव छ भन्ने पुष्टि गरेका यी दुर्इ हास्य कलाकारको समर्पणलार्इ सलाम सहितको सम्मान सम्पूर्ण देशवासिले गरेका छन्, अर्को यूगसम्म नविर्सिने गरी समाजका अनमोल धरोहर बन्न सफल भएका छन् ।
नव वर्ष २०७४ ले यस्ता नायकहरू अझै सार्वजनिक गर्न सकोस्, नेपाल बन्दै गरेको अनि सामान्य नेपाली अघि बढ्दै गरेको प्रशस्त उदाहरणहरू स-गाैरव लेख्न पाइयोस् पुनः एकपटक नव वर्षको शुभकामना ।